November 29, 2020 Xuseen 13
Puntlandtimes (Muqdisho)-Xukuumadda federalka ah ee Soomaaliya ayaa caawada qaadanaysa mid kamid ah go’aamadii ugu kharaaraa ee diblumaasiyadeed xilli uu dalku marayo waqti kala guur ah loona diyaar garoobayo doorashada madaxtinimada.
Dowladda Soomaaliya ayaa caawa waxa ay dalka ka cayrin doontaa safiirka dalka Kenya u jooga Soomaaliya, xilli la filayey in xiriirka labada dal soo wanaagsanaanayo kadib markii ay Kenya safaarad cusub dhismeheeda ka bilowday magaalada Muqdisho.
Xariirka labada dal ayaa si rasmi ah loo joojin doonaa, waxaana ilo xogagaal ah ay warbaahinta u xaqiijiyeen in tallaabadaan loo qaadi doono arrimo quseeya xiriirka labada dowladood oo noqday mid sii xumaanayey bilihii ugu dambeeyey.
Cadaadiska Kenya ay ku hayso dib u doorashada Farmaajo, la safashada musharixiinta mucaaradka ah ee Soomaaliya, arrimaha qaadka iyo dhinacyo kale ayaa kamid noqon doona sababaha ay dowladdu u jarayso xiriirka labada dowladood.
War ma la hubaa?
Layaab maleh haddii Farmaajo tallaabadaas qaado. Walle haddii uu tallaabadaas qaado inaan dhibic caqli ah lagu arag. Soomaali ma ka maaranta Kenya? Yaa u beddelaya? Ma Itoobiya oo holcaysa mise Imaaraadka oo Somalia ku daray 13 dal oo ay dalkooda ka mamnuuceen sidii Trump ku sameeyey 6 dal oo muslimiin ah?
Soomaali xoolaheedii oo dhan waxay yaallaan Kenya. Inta hay’ad iyo ajanabi Somalia joogana waxaa xaruun u ah Kenya. Diyaaradaha Soomaali ku socdaasho gudaha dalka waxaa xafiisyadoodu yaallaan
oo saldhig u ah Nairobi. Diyaaradaha uu ciidamada ugu daadgureeyo Gedo iyo Galmudug iyo dowlad goboleedyada kale waxaa badankood laga leeyahay ama saldhig u ah Nairobi.
Waxaan filayaa in sidaas ay u sameeyeen isaga iyo Fahad Yaasiin iyo Mahdi Guuleed naflacaarinimo iyo inay ku xakameeyaan dhaqdhaqaaqa iyo safarka mucaaradka. Waxaa xigi doona inuu mar kale soo rogo xayiraaddii diyaaradaha iyo in diyaarad kasta soo marto Xamar inta aysan gobol kale aadin.
UN-ka, IGAD, iyo Reer Galbeed waxay la safan doonaan Kenya. Waxaan qabaa in haddii arrinkaas sax yahay ay soo dedejin doonto in Farmaajo tago isagoo aan waqtigiisii dhammaan, waxay kale oo keeni doontaa halis ah dagaal Xamar ka bilowda.
Kuwii caadifada iyo wadaninimda danta ku salaysan ku doodi jirey ee meesha dhow wax ka eegi jirey, waxay taasi u arki doonaan tallaabo habboon. La arki doonee cidda ka faa’iidda iyo halka ay ku dambeyso.
Noolahan magaciisa #A.Arar la yiraahdo ku yeh “UN-ka, IGAD, iyo Reer Galbeed waxay la safan doonaan Kenya. Waxaan qabaa in haddii arrinkaas sax yahay ay soo dedejin doonto in Farmaajo tago isagoo aan waqtigiisii dhammaan, waxay kale oo keeni doontaa halis ah dagaal Xamar ka bilowda” Hhhhhhhhh
war wuxu waaaba cawaaan socdo oo aad arkeysoo oo Farmaajo Xamar Ma kenya iyo IGad iyo UNka ayaa ku hayo?.
mida kale adiga Ninyohow Dhiig soomaali maba kugu jiree adiga Gaambeela miyaa tahay Kenyankane miyey ku wasaaaan iyo IGAD.
mida kale Wadanka yaaa iska leh Soo Somali iskama lahaan yaa wadanka maziirkiisa go’aan ka gaari karo soo madaxweynaha ma ahan.
Webka hadaan Maamuli lahaa Block ayaan beeerka kaa gelin lahaa Baqti adigoo kale Ayaa Af somali soo qoraayo shidhis
Abdirahman ha caytamin, qofkaas horay baan KAMAU ugu bixiyaye! Waxa uu cabsan yahay Kenya, umana malaynayo in uu Soomaali yahay, ayaamahan luuqadda waa la bartaa.
Dhinaca kale, dad badan oo qaarkood MADAXWEYNAYAAL u sharraxan yihiin baa aragtidaas qaba! Nasiib-darrooyinka jirayna kamid tahay in qof af Soomaali qorayaa uu sidaa u fekero.
Si kastaba, waa hanbalyeeynaynaa dawladda haba lasoo daahdo e.
ka dhexbax arimaha somalia qof xanuunsan baadtahay adoonyahaw indhaha guduudan.yaan ilkaha lagaa jajabine get out
Magaca aad wadato uma qalantid. Waxaad tahay faaxish rakhiis ah oo uraya. Anigu rag badan oo aan halkan ku doodno baa jira laakiin aan si edeb leh wax isu weydaarsanno. Wallaahi, wax badan baan ka fakeray xitaa inaan kuu jawaabo.
Cabdiraxman cayda qayaxan waa khalad iyo nusqaanimo Mr R”Arar arigti ayuu dhiibtay haku colaadin waayo waa u xor inuu sida uu doono u fekero sankana haka gelin Armaajahan aad la ordayso.
Sheekadan waa qiiq isku qarin macne weyna kuma fadhido waayo, adoonta kenya si walba way u bahdishey somalida dalkoodii iyo kuwa sida xoolaha dul tuban maalkoodiina geliyey si qayrul caadiya.
Hadii wax laga qabanayo Adoontaas ku kibirtey somalida marhoreba way banaaneyd, laakiin Nin qoyan biyo iska dhowro weeye kuwan Xamar ku xareysan ee Lagu ilaaliyo waayo waayo waxba gacmaha uguma jiraan wuxuun baa loo yeedhiyaa, intooda badanina nairobi ayayba degen yihiin reerahoodu ganacsina ku leeyihiin kuwan isku sheega xildhibaanada tuugada ah ee shuftada ah,
Markaa kenya sidaas ayaan loogu dhuci karin bahdilkuba wuu soconaya ilaa maryooley caqli la timaado dalkoodana dhistaan xoolaha nairobi la geliyeyna lagasoo raro oo dhulkoda geliyaan.
Waxan xasuustaa kan safiir kusheega somalia u fadhiya kenya oo kenya soo eridey kii kenyana xamar iska joogey kadib kenya lasoo baryey dabadeed uu sidaa ku noqday safiir ku sheega somalia.
Kismayo ayay iska degeen oo weliba isa siiyeen kenya maa taa wax kaqabtaan.
Sheekadan waxkala maaha Armaajo iyo Nacamlayaashiisa ayaa isleh ku xumeeya mucaaridka Xamar laakiin waa faashil waayo cidiba dheg jalaq umaa siiso waayo waxay yihiin ayay cidwalba ogtahay.
Somalida xaalkeedu waa nin qaawan oo isu haysta inuu maryo xidhan yahay.
War Webkan Dad Kikuyu u dhashay ayaaba wax ka aqristaan filaaa” Wadankeena Somalia waa in la ilaaliyaa sharaftiisa iyo karaaamadiisa” Ilmahan kikuyuda u dhashay ee kala ah #JAMAAMU IYO A.ARAR# meeshan dood ma taaalo Af Somali hadaad so barateen waa niila qabanayaa√√√ meeshan Kikuyanimo loo baahno
Wallee waan u jeedaa Caruurtii Minkiste iyo Gabre weli ma qaan gaarin, Caqli iyo Aqoonna uma kordhin.
Dabadhilifnimada, Qaa’imiin waddaninimada iyo Jaajuusnimada waa laga duceystaa,waddanada adduubka ka jira Qofkii ay ku caddaato Dabadhilifnimada, Qaa’imiin waddaninimada iyo Jaajuusnimada waa la daldalaa, qaarna xabsi baa lagu Ridaa.
Cidna Sharciga kama sarreyso No body above the law).
Laakiin Soomaaliya waxaan haynaa kuwo iskugu faanaanaya Dabadhilifnimada, Qaa’in waddanimada iyo Jaajuusnimada maalin iyo Habeen
Nin Abwaan Soomaaliyeed baa wuxuu yiri waxaa jirey Qof Hunguri u noqda Jaajuusnimo iyo Qaa’in waddanimo, laakiin buu yiri hadda waxaan haynaa kuwo iyagu Lacagtii wata, taas waxaan ku xasuustay Arrin dhacday oo uu ka Sheekeynayey Siyaasi Faraax Macalin, arrintaas oo ku saabsaneyd waxyaabihii uu GABRE KU SAMEYN JIREY SIYAASIIN SOOMAALIYEED OO BADAN!
Haddi ay wadanimo ka tahay oo uu run sheegayo What about Etoopiya
Ha ku daro ayagana oo ha cayriyo, fara galinta ugu wayn ayagaa wada.
Tan kale dadka qaar iyo Gobaladooda waa caburinaya, qaarna waa la or_ordaya, sidaan rabana waa yeelaya, waxaas wadani-nimo ma aha
Sidaa daraadeed meesha isaga bayr
Ama haddi aad rabtid dheh, waar isaga baydh.
Ayadon qofna loo gafin. Afkartu wakala duwanan karta. Caydu wa mamnuuc
Raggiinan waddeniyiinta ah ee u caaytamay Aw Farmaajo dartii, ma hubtaan in uu isagu Waddeni yahay ninka aad u xiiqsantihiin ee aad la aflagaadooneeysaan?!!
Aaway arrintii Badda?! Waa maxay dalkan Qaadtii laga Joojiyey ee loo fasaxay kan Amxaarada?
Waa maxay Itoobiyadan dhisaneeysa Ciidanka Badda ee loo Saxiixay, 4ta Dekedood ee aay iyada dooratay, ciidankii u ilaalin lahaana dhisaneeyso? Maxaase looga Beddeshay!
Waa maxay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Itoobiya darteed shaqada looga eryayo?
Waa Maxay Ciidamada Soomaaliyeed Eritrea tababarka loogu diray ee Abi Axmed Makhalle uga Dagaalamaya? Maxaase Keenay in aay hak Dhufeys Xabbad ka wada ridaan, Askeri Soomaali ah iyo Mid Amxaar ah, iyadoo loo wada dhimanayo dan aay Amxaaro leedahay?!
Bal Waddeniyiineey Su’aalan wada calaamadaha Aakhiru Samanka ah jawaabo u keena!
Tan Kenya. Kenya waa waddada aay Ummadda Soomaaliyeed u Marto dhex galka iyo ka shaqeeysiga, 54ta dal ee Afrika, ninkii Waddadaa xirana, wuxuu Ummadda Soomaaliyeed ka xiray, Qaarad weyntii Afrika ee aay si kasta ugu tiirsanaayeen, Cunaha ayuuna qabtay Soomaalida!
Marka, Ciyaalkiinan qoraya (Z) aanan Soomaaliga ku jin, kor fiiriya hoos baad u Foorartaane!
Awalan yaan la is caayin waa la kala aragti duwanaan karaa ceeb ma ahan.
WAXAA CEEB AH CAYDA IYO BEENTA SIDA DAD AADAN AHAYN IN AAD KU HADASHO MAGACOODA.
1-Dawlad kastaa iyadaa masuul ka ah arrimaheeda gudaha,haddii ay sax tahay in Kenya in ay farogalisay arrimaha guddaha Somaliya gaar ahaan Jubaland maxaa ku taageeraysaan Kenya?
Yaa dood ka qaba in Kenya ay Jubaland ay faragalin ku hayso?Dastuurka ku meel gaarka ma qoraayo in maamul Goboleed uu la gali heshiis ciidan dal kale.1 week ago Kenya waxaa ay Kismaayo ka sheegtay in aanay aqoonsanayn wasaaradda gaashaandhiga Somaliya,balse aqoonsan tahay maleeshiyo beeleedyo.Ka muwaadin ahaan sax ma ahan.
2-Kenya xaq uma lahan in ay Axmed madoobe ugu hanjabto in laga dhacaayo xoogaagii uu xaday ee Mombasa hotelka uga dhistay lana dilaayo(Inaga na sheegine isagaa sheegay)
3-Hantida aad ku waalateen is weydiiya yaa leh?Waxaa keh Somali Kenyan.Dastuurka Kenya waxaa bedelay Railla Odinga 2006/2008 wuxuu leeyahay qofkii Kenya ku nool 5 sanno xaq wuxuu u leedahay dhalashada isagoo ugu danaynaayay luo uu ka dhashay,taa waxay keentay boqolaal Somali ah in ay Kenyan noqdaan sidaa darteed dhaqaalahaas si sharci bay ku haystaan wax ka quseeya Somaliya iyo Kenya xiriirkooda ma jirto.
3-Arrinta ciidanka Gedo ciidanka qaranka halaga saaro Gedo waa hadal cayaal.Ma maleeshiyaad beeleed oo aan aragno ayaa lagu bedelayaa?
Jubaland ma lahan ciidan habaysan oo lagu aamino karo amaanka kuwa Kismaayo jooga iyo kuwa Gedo waa maleeshiyo beeleedyo.
Maamul goboleedyada ma lahan awood ay kaga hadlaan ciidan qaran,maaliyad,arrimo dibadda balse fowdada ayaa sabab u ah.
KII JECLAA AJANABI JAAJUUSNIMO JECLAA WAA YEELKIIS.
Ciidanka Kenya iyagana hala saaro nijaasta.
Somali maryooley caqli xun walee meel ma gaadhaan Haysla Meeraysato.
Bal kuwan Armaajo difaacaya ee u haysta madaxweyne dal xukuno Eega, Armaajo Wardhiigley keliya ayuu xukumaa oo weliba lagu dhex ilaaliya xitaa xitaa vilada uu degen tahay furaheeda waxa haya Askar Yugaandhis ah waar Ileyn Ceeb looma dhinto ninka noocaasa ayaa qaar madaxweyne ku sheegayaan dal iyo dad xukuma, kuwaas sidaa Aaminsani waa kuwa qabiil ku taagera ama qadhaab yar loo tuuro waa daanyeero bilaa caqliya Alxayawaaniin duli ale idin bed.
Armaajo wax baa loo yeedhiya waxba meesha kuma hayo Abiy Ahmed ayaa sidii Gabadh galbis ah marna nairobi u kaxaysta marna Addis ugu yeedho dhabta Amxaarka ayuu ku fadhiyaa, armaajo waa ninka yidhi qaadkii kenya joojiney laakiin qaadka Amxaarka waa fasax kkkkk ma xishoode beenaale fulay ah weeye.
Safiirka kenya la leeyahay waa la eryey maba joogo marhore ayuu dalkiisa ku noqday, ma safiir maqan oo aan joogin ayaa la eryaa, kan safiir isku sheega Somalia Mr Tarsan isna Xaafada Wardhiigley ayuu maalmahanba ku meeraysanayey markaa sheekan waa qiiq isku qarin masaakiinta waxmagaratada loogu talo galay yaa xayawaaniin nin war hayaa hakuu waramo Yaa Maryooley Caqli Dameer.
Kenya hadii la rabo in layska celiyo dhilka ay xooga ku joogaan ee weliba sida cad u sheegtaan ee kismayo haka saareen haday naf leeyihiin nac nac looma baahan.